Switzerland MM - Study Abroad
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာသဘာဝသယံဇာတတွေမရှိသော်လည်း ပညာရေးနှင့်ပက်သက်ရင်တော့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ပညာရေး စနစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးမှာ Bachelor အတွက် (၃) နှစ်နှင့် Master အတွက် တစ်နှစ်ခွဲကနေ (၂) နှစ်အထိ ကြာမြင့်ပါသည်။
ဒါ့အပြင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာကျောင်းများကို နိုင်ငံတကာမှလူငယ်များ အထူးစိတ်ဝင်စားကြပြီး၊ စာတွေ့နှင့်လက်တွေ့ Internship များဖြင့် ပေါင်းစပ်သင်ကြားပေးသည့်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်ရာတွင်လည်း လွယ်ကူအဆင်ပြေစေပါသည်။
ဆွစ်ဇာလန်က နာမည်ကျော်ဘာသာရပ်များစွာထဲမှ Hotel & Tourism ဘာသာရပ်ကို နိုင်ငံတကာကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားကြပြီး လာရောက်ပညာသင်ကြားသူလည်းများပြားပါသည်။
Hospitality Management အတွက် Bachelor degree ကို ၃ နှစ်ခွဲတက်ရောက်ရပြီး Diploma များလည်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ Diploma သင်တန်းများအတွက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှတက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး၊ Diploma မှတစ်ဆင့် Bachelor degree သို့တက်ရောက်မည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တက္ကသိုလ်များတွင် ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Diploma ၊ Undergraduate နှင့် Postgraduate သင်တန်းများတက်ရောက်လိုသူများအနေနှင့် ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိပြီးပါက ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကျောင်းသားဗီဇာနှင့် ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားမည့်အဆင့်ဆင့်ကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
1. မိမိသင်ကြားလိုသောဘာသာရပ်နှင့် တက္ကသိုလ် ၊ ကောလိပ်ကို STUDY ABROAD မှ အတွေ့အကြုံရှိ ပညာရေး အတိုင်ပင်ခံများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
2. ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်မာစွာချပြီးပါက ကျောင်းလျှောက်လွှာတင်ရန် စတင်ဆောင်ရွက်ပါ။
3. STUDY ABROAD Information Centre မှတစ်ဆင့် လျှောက်လွှာတင်သူများကို ကျောင်းခေါ်စာရရှိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေး၍ ခေါ်စာလက်ခံပါသည်။
4. ခေါ်စာရရှိပြီးပါက ကျောင်းလခ ပထမအရစ်ပေးသွင်းပါ။
5. နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ ကျောင်းလခပေးသွင်းပြီးနောက် ကျောင်းသားဗီဇာ လျှောက်ထားမှုအပိုင်းကို စတင်ရပါသည်။ ကျောင်းသားဗီဇာအတွက် ပညာရေးစာရွက်စာတမ်းများ ၊ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ် စာရွက်များ ၊ ကျောင်းခေါ်စာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။
*** ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏အားသာချက်တစ်ခုက ကျောင်းပြီးသွားသော ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများကို (၆) လတိတိ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင့် ဆက်လက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Business and Hotel Management School (BHMS) သည် Switzerland နိုင်ငံ Lucerne ပြည်နယ် Lucerne မြို့တွင်တည်ရှိပြီး ဟိုတယ် အုပ်ချုပ်မှု ပညာရပ်များကို စာတွေ့ (၆ လ) သာမက လုပ်ငန်းခွင်တွင် လက်တွေ့ (၆ လ) သင်ကြားလိုသည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့ စာတွေ့၊ လက်တွေ့ သင်ကြားပေးခြင်းကြောင့် ကျောင်းပြီးလျင် လုပ်ငန်းခွင့်သို့ ဝင်ရောက်ရန် အသင့်ဖြစ်စေပါသည်။ Lucerne မြို့သည် Switzerland နိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ စိတ်အဝင်စားဆုံး မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါသည်။
BHMS တွင် BA Hotel & Hospitality Management, BA Global Business Management, BA Culinary Arts, MSc International Business Management, MSc Global Business Management နှင့် အခြား Diploma, Graduate Diploma Program များကို ရွေးချယ် တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁၀) တန်းအောင်မြင်ထားသူများ (သို့မဟုတ်) iGCSE အောင်မြင်ထားသူူ များ (သို့မဟုတ်) American High School Diploma အောင်မြင် ထားသူများ Bachelor Degree များကို ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ဘွဲ့ရကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ Master Degree များကိုရွေးချယ် တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Cesar Ritz College သည် Switzerland နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးသော Hotel Management Schools Top Ten စာရင်းဝင်ကျောင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး Switzerland နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး Hospitality Educator ဖြစ်သည့် Swiss Education Group အဖွဲ့ဝင်ကျောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ Hospitality Management, Tourism Management နှင့် Entrepreneurship ပညာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချ‌ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
Cesar Ritz College တွင် တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား သူ များ သည် Double Degree အနေဖြင့် Cesar Ritz College ၏ ဘွဲ့ကိုသာမက Partner ‌ကျောင်းများဖြစ်သည့် UKမှ University of Derby သို့ USA မှ Washington State of University မှ ဘွဲ့များလည်းရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Switzerland နိုင်ငံရှိ Lucerne၊ Le Bouveret နှင့် Brig မြို့များတွင် campus သုံးခုဖြင့်သင်ကြား‌‌လျှက်ရှိပါသည်။
လစာ CHF ၂၀၀၀ မှ စတင်ရရှ်ိမည့် အလုပ်သင် Paid Internship များကို Cesar Ritz College မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသည်။
Cesar Ritz College တွင် သင်ကြားနိုင်သည့် ဘွဲ့အတန်းများကတော့
– Bachelor of International Business in Hotel and Tourism Management/ Bachelor of Arts in Hospitality Business Management
– Master of International Business in Entrepreneurship for the Global Hospitality and Tourism Industry/ Master of Arts in Entrepreneurship for the Global Hospitality and Tourism Industry
Culinary Arts Academy Switzerland ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သည် အကောင်းဆုံးသော နံပါတ်တစ် culinary school အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသောကျောင်းဖြစ်ပြီး Switzerland နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး Hospitality Educator Group ဖြစ်သည့် Swiss Education Group ၏ အဖွဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ Culinary ပညာရပ်များသာမက Entrepreneurship ပညာရပ်များကိုပါ ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးလျှက်ရှိသော ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။
Switzerland နိုင်ငံ Lucrence နှင့် Le Bouveret မြို့များတွင်တည်ရှိပြီး ထိရောက်တဲ့ small class size များဖြင့် နိုင်ငံတကာမှာ အတွေ့အကြုံ့ရှိသော chef instructors များမှ လက်တွေ့ပညာရပ် များနှင့် အတွေ့အကြုံ့များ ရရှိစေရင် သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။
Culinary Arts Academy Switzerland တွင် တတ်ရောက်သင်ကြားသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ သည် Culinary Arts Academy Switzerland ၏ ဘွဲ့ကိုသာမက partner ကျောင်းဖြစ်သည့် UK မှ University of Derby ၏ ဘွဲ့လက်မှတ်ကိုပါ double degrees အဖြစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
လစာ CHF ၂၀၀၀ မှ စတင်ရရှ်ိမည့် အလုပ်သင် Paid Internship များကို Culinary Arts Academy Switzerland မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသည်။
Culinary Art Academy Switzerland တွင် သင်ကြားနိုင်သည့် ဘွဲ့အတန်းများကတော့
– Bachelor of International Business in Culinary Arts/ Bachelor of Arts (Hons) in Culinary Arts
– Swiss Grand Diploma in Culinary Arts
– Swiss Grand Diploma in Pastry & Chocolate Arts
Hotel Institute Montreux, HIM သည် Switzerland နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးသော Hotel Management Schools Top Ten စာရင်းဝင်ကျောင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး Switzerland နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး Hospitality Educator ဖြစ်သည့် Swiss Education Group အဖွဲ့ဝင်ကျောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ Swiss Hospitality Management နှင့် American Business Management ပညာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချ‌ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ကျာင်းသူ၊ ကျောင်းသားများသည် Hospitality ဘာရပ်ကို သင်ကြားရာတွင် အထူးပြုဘာသာရပ်များအနေဖြင့် Finance, Senior Living Management, Human Resources သို့ Luxury Brand Management တို့ကိုရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
HIM တွင် Bachelor Program တက်ရောက်သင်ကြားသည့်ကျောင်းသားသူများသည် Double Degree အဖြစ် Hotel Institute Montreux မှ ဘွဲ့ သာမက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Northwood University မှ ဘွဲ့လက်မှတ် ကိုလည်းရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Geneva မြို့ နှင့်နီးပြီး အလွန်လှပသော Montreux မြို့တွင်တည်ရှိပါသည်။
လစာ CHF ၂၀၀၀ မှ စတင်ရရှ်ိမည့် အလုပ်သင် Paid Internship များကို Hotel Institute Montreux, HIM မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသည်။
Hotel Institute Montreux, HIM တွင် သင်ကြားနိုင်သည့် ဘွဲ့အတန်းများကတော့
Hotel and Tourism Management Institute (HTMi) သည် Hospitality ဘာသာရပ်တွင် ထိပ်တန်း အဆင့် (၁၇) တွင်တည်ရှိလျက်ရှိကြောင်း 2020 QS World University Rankings တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ Hotel and Tourism Management Institute (HTMi) သည် Switzerland နိုင်ငံ Lucerne ပြည်နယ်၊ Soerenberg မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား ဘာသာရပ်များ တွင် အထူးနာမည်ကျော် ထင်ရှားသည့် Switzerland နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို Hotel and Tourism ဘာသာရပ်များကို စာတွေ့ (၅)လ သင်ယူပြီး၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင်လက်တွေ့ (၆)လ သင်ယူခြင်းဖြင့် ကျောင်းပြီး၍ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ရာတွင် အခက်အခဲမရှိဘဲ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်လိုအပ်သော အရည်အချင်းများ ကိုဖြည့်ဆည်းသင်ကြားပေးပါသည်။ ဤကဲ့သို့ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်စဉ်တွင် တစ်လလျှင် (sfr 2,200) နှင့် အထက်ရရှိသောကြောင့် Switzerland နိုင်ငံတွင် Hotel and Tourism ဘာသာရပ်ကို ကျောင်းလခ၏ ထက်ဝက်ခန့် သက်သာစွာဖြင့်သင်ယူနိုင်မည့်အခွင့်အရေးများ ရှိကြောင်း သတင်း ကောင်းပါး အပ်ပါသည်။ HTMi တွင် တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတိုင်း ကျောင်း သင်ခန်းစာများ သင်ယူလေ့လာရာတွင် အခက်အခဲမရှိဘဲ အဆင့်မြင့်နည်း ပညာများနှင့် သင်ယူနိုင်ရန် အတွက် iPad mini ကို ချီးမြှင့်မည့် အထူးအစီအစဉ်ရှိကြောင်း လည်းသိရှိရပါသည်။
ကျောင်းဝင်ခွင့် သတ်မှတ်ချက်များမှာ Undergraduate Program များကိုတက် ရောက်လို သော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ (၁၀) တန်းအောင်မြင်ထားသူများ (သို့မဟုတ်) iGCSE အောင်မြင်ထားသူူ များ (သို့မဟုတ်) American High School Diploma အောင်မြင် ထားသူများ IELTS (5.0) ရရှိထားပါက တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများ Postgraduate Diploma Program များကို တက်ရောက် လိုပါက IELTS (5.5) ရရှိရမည်ဖြစ်သည်။
IHTTI School of Hotel Management သည် Switzerland နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးသော Hotel Management Schools Top Ten စာရင်းဝင်ကျောင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး Switzerland နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး Hospitality Educator ဖြစ်သည့် Swiss Education Group အဖွဲ့ဝင်ကျောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ Hospitality Management နှင့် Design Management ပညာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချ‌ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
IHTTI တွင် တတ်ရောက်သင်ကြားသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ သည် IHTTI ၏ ဘွဲ့ကိုသာမက partner ကျောင်းဖြစ်သည့် UK မှ University of Derby ၏ ဘွဲ့လက်မှတ်ကိုပါ double degrees အဖြစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
IHTTI တွင် လာရောက်သင်ကြားမည့်ကျောင်းသားသူများသည် Switzerland နိုင်ငံမှ Caux နှင့် Leysin ရှိ အလှဆုံးသော သမိုင်းဝင် palace hotels များတွင် Swiss Hotel Management School မှ ကျောင်းသား‌ ကျောင်းသူများနှင့် အတူတက်ရောက်သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။
လစာ CHF ၂၀၀၀ မှ စတင်ရရှ်ိမည့် အလုပ်သင် Paid Internship များကို IHTTI မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသည်။
IHTTI တွင် သင်ကြားနိုင်သည့် ဘွဲ့အတန်းများကတော့
QS Word University Ranking အရ SHMS, Swiss Hotel Management School သည် Hospitality နှင့် Leisure Management ဘာသာရပ် အတွက် အကောင်းဆုံး ကျောင်း အဆင့် ၅ အဖြစ်ရပ်တည်‌ နေပြီး Switzerland နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး Hospitality Educator ဖြစ်သည့် Swiss Education Group အဖွဲ့ဝင်ကျောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ Hospitality Management၊ F&B၊ Events နှင့် Resort & Wellness Management ပညာရပ်များကို အဓိက သင်ကြားပို့ချပေးနေပါသည်။
SHMS တွင် တတ်ရောက်သင်ကြားသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ သည် SHMS ၏ ဘွဲ့ကိုသာမက partner ကျောင်းဖြစ်သည့် UK မှ University of Derby ၏ ဘွဲ့လက်မှတ်ကိုပါ double degrees အဖြစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
SHMS တွင် လာရောက်သင်ကြားမည့်ကျောင်းသားသူများသည် Switzerland နိုင်ငံမှ Caux နှင့် Leysin ရှိ အလှဆုံးသော သမိုင်းဝင် palace hotels များတွင် နေထိုင်တက်ရောက်သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။
လစာ CHF ၂၀၀၀ မှ စတင်ရရှ်ိမည့် အလုပ်သင် Paid Internship များကို SHMS မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသည်။
SHMS တွင် သင်ကြားနိုင်သည့် ဘွဲ့အတန်းများကတော့